Ywar Thar Lay (YTU): 2013
ငပြည့် မနေ့ကမှ ငါမင်းသတင်းကို သိရတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး သူငယ်ချင်း။ မင်းက ဒီစာကို ဖတ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ငါက ဒီစာကို ရေးချင်တယ်။ ငါတို့နောက်ဆုံးဆုံဖြစ်တာ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂျပန်စာသင်တန်းရှေ့မှာ..အဲ့ဒီနေ့က ငါ့အမ အိုင်စီမေဂျာနဲ့ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့။
မင်းကို ပုံမှန်ဆို ငါက သတိမထားမိဘူး။ တခြားလူတွေရဲ့ စကားသံတချို့ရယ် အတန်းပြောင်းဖို့ လာတိုင်ပင်တဲ့အတွက် အတန်းခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ စကားစပြောဖြစ်တယ်။ မင်းအတန်းမပြောင်းဖြစ်ဘူး။ မင်းရယ် ငါရယ် ငရဲရယ် သချာင်္ချိန်တိုင်းပျော်ရတယ်။ စောစောပြီးတာချင်းတူတာမို့ စကားပြောဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်။ အစားကြိုက်တဲ့ငါ့အတွက် မင်းအမကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Sandwich က ကုန်ကုန်သွားသလို၊ အိမ်ကိုဒီအတိုင်း ပြန်မပါသွားလို့ မင်းလည်း အဆူမခံရတော့ဘူး မဟုတ်လား။
ငါတို့ထဲက မောင်လူဆိုးကမင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုလာတယ်။ ကန့်ကွက်နေရအောင် ကလေးတွေမဟုတ်တာမို့ မင်းတို့ချင်း သဘောတူလက်ခံရင် ငါတို့ကလည်း လက်ခံမယ်။ ဒါပေမယ့် မောင်လူဆိုးကို မင်းလက်မခံနိုင်တာ ငါသိတယ်။ မင်းအနားက သကောင့်သားတွေကလည်း ခဏနေတယောက် ခဏနေတယောက်ပဲ။ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ နားလည်ရခက်တယ်လို့ ငါမင်းကိုကြည့်ပြီး ပိုယုံကြည်လာတယ်။ ပြန်ကြိုက်တာလည်း မဟုတ်ပေမယ့် ကပ်လာတဲ့လူတိုင်းကို လက်ခံနေတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ ငါမမေးခဲ့မိဘူး။ မင်းအကြောင်းနဲ့ မင်းရှိမှာပဲ။
မင်းအကြောင်းနဲ့တင် ရပ်မသွားတာ ငါနောက်ကျမှသိရတယ်။ မောင်လူဆိုးက ငါ့ကိုရန်ရှာတဲ့နေ့မှပါ။ ငါလည်းသတိမထားမိဘူး။ ဆရာ့ရှေ့မှာ ပရောဂျက်အတွက် ငါတို့နှစ်ယောက် အတူတူဖြေရတဲ့အခါ ငါ့လက်ကို မင်းဆုပ်ကိုင်ထားတာ မင်းကြောက်နေလို့လို့ပဲ ငါနားလည်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါက အစ်ကိုတယောက်လိုပဲ စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့တာ။ ဖြေပြီးနောက်တနေ့မှာ သူက ငါ့ကိုရန်လာစတာ။ မင်းကိုတော့ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ မပြောဖြစ်ဘူး။ ပြောစရာလည်း လိုတယ်လို့ကို မထင်တာ။
ဒါပေမယ့် မင်းသိနေခဲ့တယ်။ ပရောဂျက်လုပ်တဲ့အချိန် ဆရာ့ကို ဟိုကောင်ငိုပြပြီး ငါတို့နဲ့ တဖွဲ့တည်းလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပါ မင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မင်းက အရှေ့လှေခါးကနေ အိမ်ပြန်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အနောက်လှေခါးကနေ ပြန်ပြန်တက်ရင်း ဟိုကောင့်ကို အရူးလုပ်နေခဲ့တာ. အဲ့ဒီကောင်အကြောင်းကို ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး တခွန်းမှ မပြောခဲ့ကြဘူး။
မင့်ကို အမှတ်တရ အရှိဆုံးက ပရောဂျက်အတွက် လိုင်းကားစီးတဲ့နေ့ကိုပဲ။ ဘ၀မှာ လိုင်းကားမစီးဖူးဘူးဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ငါ့တသက်မှာ တခါပဲတွေ့ဖူးတာ။ မင်းရှက်နေမှာစိုးလို့ တကယ်က ကားအလယ်ထိုင်ခုံမှာ ကိုးရိုးကားယားဖြစ်နေတဲ့ မင်းကို ငါရီချင်တယ်။ ဘ၀ဆိုတာ အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့တဖွဲ့လုံးသွားဖို့ တက္ကစီနဲ့လည်း မဆန့်ဘူးမဟုတ်လား။ အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ကွာ.
မင့်ရဲ့ကိုးရိုးကားယားနိုင်မှုဟာ အဲ့ဒီမှာ မရပ်ဘူး။ နောက်တခါ ဆရာတွေကို ပရောဂျက် ရှင်းပြတဲ့နေ့မှာ ဆံပင်နှစ်ဖက်ခွဲပြီး အရုပ်တရုပ်လို ယိုင်ထိုးပြီးလျှောက်လာတဲ့တခါ ကျန်သေးတယ်။ အ၀ါရောင်တောက်တောက် ဖဲကြိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ လွယ်နေကျ အရုပ်ကျောပိုးအိတ်နဲ့ တကယ့်ဟာသ။
ငါတို့အတန်းမပြီးခင် သူရိန်နဲ့ မင်းငြိနေတယ်လို့ ငါကြားတယ်။ မင်းရဲ့ ဇာတ်ထုပ်တွေက တရုပ်ကားတွေလို အတွဲလိုက်လာတာမဟုတ်လား။ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်တော့ မင်းကိုယ်တိုင်ပဲသိမပေါ့။ အရင်ဆုံး သြစတြေးလျကိုထွက်သွားတဲ့ ရှမ်းကလေး၊ နောက်တခါ ကိုလားရှိုး၊ ပြီးတော့ ကိုသင်္ဘော၊ ငါတို့ မောင်လူဆိုး နောက်မှာ သူရိန်ပေါ့။
အတန်းပြီးသွားတဲ့အခါ ငါတို့တွေ တယောက်စီ ကွဲသွားကြတယ်။ ငါလည်း ငရဲတို့အိမ် မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။ မာမားတို့နဲ့ သာမညကို တခေါက်တော့ အလည်လိုက်သွားသေးတယ်။ ငရဲဆီက မင့်ဖုံးနံပါတ်ရလို့ ငါဖုံးဆက်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ငါ ဂျမားမှာ တယောက်တည်းနေတယ်။ ဟင်းချက်ရင်း ဖုံးဆက်နေတာ။ နောက်ပိုင်းတော့ မဆက်ဖြစ်တော့ဘူးကွ။ အလုပ်မအားတာလည်း ပါတယ်။ မင့်အားမအားလည်း မသေချာလို့။
သိပ်မကြာခင် ငါ စင်္ကာပူကိုထွက်ခဲ့တယ်။ အတန်းထဲက ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူး။ ငရဲတို့အိမ်နဲ့ရောပေါ့။ ဟိုတမြန်နှစ်က မြန်မာပြည်ပြန်တော့ ၁၃လမ်းအိမ်ရှေ့ကို ဖြတ်လျှောက်ဖြစ်သေးတယ်။ ငရဲတို့ မနေတော့သလိုပဲ။ ငါတို့နှစ်ယောက် စာအတူကျက်တဲ့ ထပ်ခိုးလေးကိုလွမ်းသွားတယ်။ မာမားရဲ့ တရုတ်ဆေးနဲ့ကြက်သားဟင်း အနံ့ကို ပြန်ရဦးမလား လက်ကိုနမ်းကြည့်မိသေးတယ်။
တကယ်ဆို ကြားရတဲ့ သတင်းကို ငါမယုံနိုင်ဘူး။ မင်းဆုံးသွားပြီဆိုတာ တကယ်မဟုတ်ဘူး။ မင်းဟာ ရှိနေတုန်းပဲ ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲ။ အရပ်ကြီးကလန်ကလားနဲ့ ကျောင်းရဲ့ ကော်ရီဒါတခုလုံးပြည့်အောင် ယိမ်းထိုးပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့ မင်းကို ငါတခေါက်လောက် မြင်ချင်သေးတယ်။ မင်းစောင့်နေပါ ငါ ဒီပုစ္ဆာပြီးအောင် တွက်ပြီးရင် မင်းရှိတဲ့နေရာကို လာခဲ့မယ်။
သူငယ်ချင်း ငပြည့် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ….
Posted by ywartharlay-ytu at 1:19 PM0comments Links to this post
လောကမှာ လက်သင့်မခံနိုင်ဆုံး အမှုကိစ္စမှာ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းထက် အခြားရှိလိမ့်မည်ဟု သူဘယ်တုန်းကမှ မှတ်ထင်မထားခဲ့။ ကမ္ဘာကြီးက လုံးသည့်အလျောက် အဆုံးနှင့်အစမှာ အမြဲကပ်လျက်ရှိစတမ်းဟု တွေးမြင်ယူဆနေခဲ့ပါလျက်.....
အဲ့ဒီနေ့မနက်က သူရုံးနောက်မကျခဲ့လျှင်....အကယ်၍ ရုံးမတက်ခဲ့လျှင်..ဆိုသော ကြံမိကြံရာ အတွေးများဖြင့်သာ။ သူစီးနေကျ ၁၈၈ကိုမစီးဘဲ တခြားကားပြောင်းစီးဖို့ အကြောင်းသည် နောက်ကျခြင်းကြောင့်ပင် မဟုတ်လော။ နောက်ကျလက်စနဲ့ ရုံးမတက်ပဲရှိစေဟု စိတ်မပြောင်းပဲ ခုိုင်ခိုင်ကျည်ကျည်ရုံးကို သွားနေမိသောကြောင့်လည်း ပါသည်။
ရုံးတက်ချိန်ဖြစ်၍ တိုးဝှေ့နေသော လူအုပ်ထဲတွင် ကျနော့ထက်အရပ်နိမ့်သောသူများ ပါလေ့ရှိသည်..
အဲ့ဒီ အဆိုပါနေ့တွင်တော့ လက်ကိုင်တန်းက ကွင်းကို မမှီမကမ်းလှမ်းနေသော အရပ်နိမ့်သူသည် ကျနော့ရှေ့ရှေ့တည့်တည့်...ထို့ထက်ပို၍ သူ့မျက်နှာ မော့ပြီး ကွင်းကို ကိုင်နေသောအခါ တန်းကိုလွတ်အောင် ခေါင်းငုံ့ထားသော ကျနော့မျက်နှာနှင့် တည့်မတ်စွာ....
ထိုအခါ အမည်းရောင်စက်ဝိုင်း၏ ပြင်ပရှိ အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့စက်ဝိုင်းများသည် ကျနော့အား များစွာ ဒုက္ခပေးလေတော့သည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စွဲလမ်းဖူးသော ပြောင်ခေါင်းစိမ်းများပမာ အရည်ရွှမ်းလဲ့ ဝင်းစိုနေသော အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့များသည် ကျနော့အား တစထက်တစ....
မျက်နှာလွှဲဖယ်ရန် ခက်ခဲသော နေရာအကျပ်အတည်းတွင် မေ့လျော့စွာ အားမနာပါးမနာ ငေးမောနေသော ကျနော့ကို မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လုပ်ခြင်းဖြင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအခါမှ မျက်တောင်များကို အနားသတ်ထားသော အမည်းရောင် စည်းမျဉ်းကို ကျနော်မြင်သည်.....ရပ်
သို့သော် အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့သည် ကျနော့အနားတွင် ရစ်သီရစ်သီဖြင့်သာ။ သွားစမ်းကွာဟု ပါးစပ်က ပြောပြီး မောင်းမထုတ်ခဲ့သော်လည်း လက်ထဲတွင် အလုပ်မပြတ်စေခြင်းဖြင့် ကျနော့စိတ်ကို ချည်တုပ်သည်။ တရုံးလုံးက အရင်လို ပြောင်နောက်နေကြ ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ကောင်ကလေး ငြိမ်သက်နေသည်ကို ထိုင်ပြီးကြည့်နေကြသည်။ သူအလွန်ကြိုက်သော ဘောလုံးအသင်း ရလာဒ်ကို တိတ်တဆိတ် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်လိုကြသည်။ မည်သူမျှ မသိနိုင်သော အကြောင်းအရာမို့ သူက သီချင်းတီးတိုးဆိုရင်း အလုပ်ကိုလုပ်မြဲ....
ထို့နောက်တွင် သူစီးနေကြ ၁၈၈ကားကြီးကိုသူမေ့လိုက်သည်။ ပြောင်းလဲလွယ်တတ်သည့် သဘောကုို တရားသဘောလို့ ခပ်ပါးပါးပြောရင်း မနက်ခင်းတိုင်းကို အညိုရောင်ခြယ်သည်။ အနက်ရောင်စည်းမျဉ်းအထက်တွင် တခါတရံ မီးပွိုင့်များပါလာတတ်သလို ရံဖန်ရံခါ ကြယ်ပွင့်များလည်း ငြိတွယ်လာတတ်...
မီးပွိုင့် သင်္ကေတ အစိမ်းရောင်တချို့သည် ရော်ရွက်ဝါတို့ မကြွေခင် လင်းသည်။ အဆိုပါ ရွက်ဝါတို့ကို မြေပေါ်ကြွေသက်မဆင်းခင် ဖမ်းဆုပ်ရင်း ကျနော် လေထဲကို အားပါးတရ ခုန်ပစ်လိုက်သည်။ ထိုနေ့က တရုံးလုံး ကျနော့၏ အစ,အနောက်ကို ပြန်ရသွားကြလေသည်။ လွတ်မြောက်နေသော သူတုို့ရက်များကို မေ့လျော့စွာ သူတို့အားလုံးကျနော်နဲ့အတူ အားပါးတရ ရီလိုက်ကြ......
တကယ်တမ်း မရီမောနိုင်သင့်ဆုံးသူမှာ ကျနော်ပင်ဖြစ်သည်။ သူကျနော့ကို အရူးလုပ်လိမ့်မည်ဟု ဘယ်တုန်းကမျှ မယုံကြည်။ သို့သော် သူလုပ်သွားခဲ့လေပြီ။ သူနဲ့အတူ တရုံးလုံးက ကျနော့ကို လက်ညှိုးထိုး ဝိုင်းဟားနေကြသည်ဟု မက်သော အိပ်မက်မှန်နေပါပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကျနော့ကို လူညံ့တယောက်ဆိုပြီး ရယ်သွမ်းသွေးကြမည်။
လေတိုက်တိုင်း မုန်းသည်။ ၁၈၈ကားကိုလည်း မုန်းသည်။ ရုံးနောက်ကျသော အဆုိုပါနေ့ကိုလည်း မုန်းသည်။ ယနေ့ တနင်္လာနေ့ကိုလည်း မုန်းသည်။ ကျနော့ကို ပိုမုိုချစ်ခင်လိုပြီး သူတပ်လာခဲ့သော အပြာနုရောင်ဖျော့ဖျော့ မျက်ကပ်မှန်ကိုလည်း မုန်းသည်။ မျက်ကပ်မှန်ကို မျက်ကပ်မှန်မှန်းမသိသော ကျနော့ကို ကျနော်သာ၍ မုန်းသည်။ အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့သည်လည်း မျက်ကပ်မှန်ဟု သိလိုက်သောအခါ ပို၍ပို၍မုန်းသည်...
သို့ဖြင့် အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့များသည် ကျနော့အနားတွင် ပတ်ချာလည်, လည်လျက်သာ ရှိနေတော့သည်......
Posted by ywartharlay-ytu at 7:44 AM0comments Links to this post
မင်းမန်၊ ခိုင်ဒင်းနဲ့ အနှိပ်ခန်း
မနကျကိုးနာရီလောကျ လာချေါမယျဆိုတော့ ရှဈနာရီလောကျမှာထတယျ။ ဟိုတယျက ကြှေးတဲ့ မနကျစာပူပူနှေးနှေးကို အားရပါးရစားဖို့။ အကွိုကျဆုံးက ခေါကျဆှဲပါ။ ပနျးကနျလုံးလေးနဲ့ပေးတာမို့ နှဈလုံးတောငျဆှဲလိုကျတယျ။ လတျဆတျတဲ့လထေုရယျ အသီးအနှံတှရေယျနဲ့ မနကျခငျးဟာ ဒှိယံဒှိယံဖွဈလို့နတေယျ။
ဒီနတေ့ော့ နာမညျကြျော သခငြ်ျိုငျးဂူခုနှဈခုထဲက နှဈခုကိုသှားမယျ။ ပထမဆုံးသှားဖွဈတာ မငျးမနျဘုရငျရဲ့ သခငြ်ျိုငျးတျောပါ။ ငုယငျနနျးဆကျရဲ့ ဒုတိယမွောကျဆကျခံသူဖွဈပွီး နနျးစံသကျ ၂၁နှဈ အသကျ ၅၀မှာ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။ အိမျရှစေံ့သားတျောကွီးကှယျလှနျသှားတာကွောငျ့ မရှယျဘဲ စျောကဲမငျးဖွဈလာတဲ့ မငျးမနျဟာ ကြူးကြျောလာသူ နယျခြဲ့ ဥရောပသားတှကေို တှနျးလှနျလိုစိတျပွငျးပွတဲ့သူ တယောကျပဲဖွဈတယျ။
သခငြ်ျိုငျးကိုရောကျသှားတဲ့အခါ သာယာလှပမှု၊ ရှုခငျြ့စဖှယျ ခမျးနားလှပစှာ တညျနတောကိုတှရေ့တယျ။ ၁၈၄၁မှာ စတငျဆောကျလုပျခဲ့ပွီး ဆောကျလုပျနဆေဲကာလမှာ မငျးမနျသဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ အားလုံးပွီးစီးသှားခြိနျက နှဈနှဈအကွာ ၁၈၄၃မှာပါ။
ဒီသခငြ်ျိုငျးက ဒုတိယမွောကျကနြျောရောကျဖွဈတဲ့သခငြ်ျိုငျးဖွဈပွီး သတိထားမိသလောကျ သူတို့ရဲ့ တညျဆောကျပုံက အဝငျတံခါးအပွီးမှာ တောငျကုနျးတခုကို တကျ ပွနျဆငျး နောကျတကျတောငျကုနျးတခုကိုတခါပွနျတကျ နောကျဆုံးအတှငျးပိုငျးမှာ အုတျဂူတျောရှိတာပါ။ ဒီသခငြ်ျိုငျးမှာတော့ တောငျကုနျးမွငျ့တခုနဲ့တခုဟာ တညီတညျး ထပျတူကဆြောကျလုပျထားတာကိုတှရေ့တယျ။ အဝငျတံခါးဝတိုငျးရဲ့ အလယျတံခါးပေါကျကို ဘုရငျကလှဲရငျ ဘယျသူမှ ဝငျရောကျခှငျ့မရှိတာမို့ ပိတျထားတာပဲတှရေ့တယျ။
သခငြ်ျိုငျးထဲက ပနျးခွံထဲမှာ လိပျပွာတှနေဲ့ ပနျးတှကေိုလညျး ဓါတျပုံရိုကျမိပွနျတယျ။
သူ့အုတျဂူတျောကိုရောကျဖို့ လှခေါး ၃၃ထဈကို တကျခိုငျးထားပွနျတယျ။ လခွမျးပုံစံရကေနျတဲ့အတူ အေးမွတဲ့လထေုဟာ ပတျဝနျးကငျြတခုလုံးကို မလြေ့ော့စခေဲ့ပါတယျ။
သခငြ်ျိုငျးတျောက အပွနျ မွဈဘေးနားကနေ စိတျကူးယဉျပွီး လမျးလြှောကျခိုငျးခဲ့တာမို့ ကွညျနူးစရာ ရှုခငျးနဲ့အတူ အတှေးတှဟော ဖွနျ့ကကျြလို့။နလေ့ညျစာထမငျးကို သူတို့စီစဉျထားတဲ့ ဆိုငျမှာလိုကျကြှေးပွီး နောကျတနရောကိုကူးကွပွနျတယျ။
ဒီတခါသှားတဲ့နရောက နောကျဆုံးဘုရငျဖွဈတဲ့ ခိုငျဒငျးရဲ့ သခငြ်ျိုငျးတျောပါ။ သခငြ်ျိုငျးတျော အမြားစုဟာ မွဈရဲ့နံဘေးမှာ မွပွေနျ့နရောမြိုးမှာတညျဆောကျထားလရှေိ့ပွီး ခိုငျဒငျးရဲ့ သခငြ်ျိုငျးတျောကိုတော့ တောငျစောငျးပျေါမှာ ဆောကျထားခဲ့တယျ။ ပွငျသဈကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျလလေ့ာပွီး တညျဆောကျခဲ့တာမို့ ပွငျသဈအငှအေ့သကျလှမျးမိုးမှုတှေ မြားတယျလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။
နနျးစံသကျကိုးနှဈနဲ့ ရုပျသေးဘုရငျအဖွဈနာမညျကြျောခဲ့တယျ။ သူ့အရှဘေု့ရငျနှဈပါးလုံးကို ပွငျသဈအုပျခြုပျသူတှကေ ဖိအားပေး နနျးစှနျ့ခိုငျးတာကွောငျ့ သူ့အဖွဈကလညျး ထီးနနျးဟာ ရုပျပွတခုသကျသကျပါပဲ။ ပွငျသဈတှနေဲ့ အဆငျပွအေောငျနထေိုငျတာကွောငျ့ တိုငျးသူပွညျသားတှကေ မကွညျဖွူတာကိုလညျး ခံခဲ့ရတယျ။ ပိုဆိုးတာက သူ့သခငြ်ျိုငျးတျောအတှကျ အခှနျ ၃၀ရာခိုငျနှုနျးပိုကောကျခဲ့တာပါ။
သခငြ်ျိုငျးတျော ဆောကျလုပျတဲ့ အခြိနျ ၁၁နှဈကွာခဲ့တယျ။ ဗီယကျနမျရိုးရာအငှအေ့သကျတှေ ပြောကျကုနျပမေယျ့ ထူးခွားတဲ့ တညျဆောကျပုံတခုတော့ ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ ထူးခွားတာက ကွီးမာတဲ့ နဂါးရုပျကွီးတှေ၊ နံရံတှနေဲ့ သူ့ရုပျကွှကို ခွယျသထားတဲ့ ကွှအေတတျပညာ၊ မကျြနှာကွကျပျေါက နဂါးကိုးကောငျတို့ပါပဲ။
သခငြ်ျိုငျးတျောတှကေို ကွညျ့ပွီးတဲ့အခါ စိတျထဲမှာ ကဗြာတပိုဒျကို ရရှေတျမိတယျ။
ဒီလိုမြိုးကွီးကယျြခမျးနားစှာ မှတျထငျကနျြရဈဖို့ထကျ လူသပေမေယျ့ နာမညျမသပေဲကနျြရဈဖို့ကကော အရေးမကွီးဖူးလား။ ပွီးတော့ တခွားလူတှရေဲ့ ခြှေးနညျးစာတှကေို အတငျးအဓမ်မယူပွီး အခုလို ဆောကျရတာကို လိပျပွာသနျ့နိုငျပါ့မလား…တယောကျနဲ့တယောကျ အတှေးအချေါအယူအဆခွငျး မတူညီနိုငျတာမို့ ကိုယျ့ခံယူခကျြနဲ့ ကိုယျပဲမဟုတျပါလား…
ပွနျအထှကျမှာ ကနြော့တိုးဂိုကျရဲ့ သူငယျခငျြးက ဗီယကျနမျဝတျစုံကိုဝတျလာတာမို့ သူ့ပုံကို ခှငျ့တောငျးပွီး ရိုကျယူခဲ့ပါတယျ။
သခငြ်ျိုငျးက ပွနျလာတဲ့အခါ ဟိုတယျက အနှိပျခနျးမှာ အနှိပျခံမယျဆိုပွီး စိတျကူးတယျ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျက သူတို့ ဗီယကျနမျအနှိပျပညာကို စမျးသပျပါလို့ မှာလိုကျတာကိုး။ ခကျတာက အနှိပျဆိုတာရုပျပွ နောကျကှယျက တခွားအမှောငျကမ်ဘာ။ သူနှိပျတာကနညျးနညျး စြေးချေါနတောက မြားမြား။ ငါ့မိနျးမနဲ့လာတယျဆိုတော့မှ ရပျသှားတယျ။ တျောသေးတယျ အဲ့ဒီညက သနျးခေါငျလောကျမှာ ဟိုတယျအခနျးတိုငျးကို ရဲကလာစဈပါတယျ။ ဘယျတိုငျးပွညျမှာမှ အဲ့လိုမကွုံဖူးသေးဘူး။ အတှအေ့ကွုံပေါ့…
အလုပျထဲက တယောကျပွောဖူးသလို သူ့အမြိုးသားက တရုတျပွညျကို အလုပျနဲ့သှားတာမို့ သူလိုကျသှားခဲ့သတဲ့။ ညနလေောကျရောကျတော့ အခနျးထဲက ဖုနျးမွညျလာပွီး သူတို့လာရတော့မလား လာလို့ရမလား ဘာညာလုပျတော့ နတေော့နတေော့ မလာနဲ့တော့ ဒီမှာငါရောကျနှငျ့နပွေီလို့ ပွနျဖွခေဲ့တယျလို့ ရီစရာပွောဖူးတာ အမှတျရမိတယျ။
ရာသီဥတု အေးအေးမှာ ကှေးကှေးလေး နှပျလိုကျဦးမယျ။ နောကျတနမှေ့ ဆကျတာပေါ့….
Posted by ywartharlay-ytu at 10:31 PM0comments Links to this post
Labels: Vietnam, အမှတ်တရ ဘဝခရီး
ခရမျးရောငျနနျးတျောကို ရောကျတဲ့အခါ နနျးတျောအဝငျတံခါးဟာ ခမျးနားလှနျးနတေယျ။ ဒါတောငျ ပွငျသဈ အမရေိကနျစဈပှဲတှကွေောငျ့ အပကျြအစီးတှကွေားထဲမှာ ကနျြရဈခဲ့တာလေးတှေ။ တောငျပိုငျးဗီယကျနမျရဲ့ ငုယငျနနျးဆကျ ထီးနနျးစိုကျရာ ခရမျးရောငျနနျးတျောဟာ ၁၈၀၄ခုနှဈ စတညျဆောကျခြိနျကနေ နှဈပေါငျး နှဈရာ့တဆယျနီးပါးလောကျကွာမွငျ့နခေဲ့ပွီ။ ၁၉၉၃ခုနှဈကစပွီး ယူနကျစကိုရဲ့ ထိနျးသိမျးမှုအောကျမှာ ဆကျလကျရှငျသနျနဆေဲ..
Image Credit to Philippe Landfond
ဘဂေငျြးက နနျးတျောရာကို တုပထားတယျလို့လညျး ဆိုကွသလို၊ ဗီယကျနမျ ဗိသုကာပညာရှငျမြားရဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ပဲတညျဆောကျထားတယျလို့လညျး အငွငျးပှားစရာဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဘဂေငျြးနနျးတျောဟာ တောငျဖကျကိုမကျြနှာမူထားပွီး ခရမျးရောငျနနျးတျောကိုတော့ အရှဖေ့ကျကို မကျြနှာမူထားတာမို့ တနညျးကှဲပွားလို့နပေါတယျ။ ကြုံးတှေ၊ ထူထညျးတဲ့ နံရံတှနေဲ့အတူ နနျးတျောဟာ နှဈကီလိုမီတာခှဲလောကျတောငျ ကယျြပွနျ့တယျ။ အရငျတုနျးကတော့ မွသေားနံရံတှဖွေဈပွီး နောကျပိုငျးမှာ လုပျသားပေါငျး သောငျးဂဏနျးပမာဏနဲ့ ကြောကျသားနံရံကိုပွောငျးလဲပဈခဲ့တယျ။
၁၉၉၀နှဈလယျလောကျပိုငျးအထိ နောကျဆုံးမငျးဆကျစိုးစံခဲ့ရာ အခနျးဆောငျပေါငျးရာနဲ့ခြီပွီးရှိနခေဲ့လကျြ သဘာဝဘေးဒဏျ၊ စဈဘေးဒဏျမြားကွောငျ့ပွိုပကျြခဲ့ပါပွီ။ အခြို့အဆောငျမြားမှာ အရှတေို့ငျးလကျရာနဲ့ အနောကျတိုငျးပွငျသဈလကျရာမြား ပေါငျးစပျရောထှေးနတောတှရေ့တယျ။
ငုယငျမငျးဆကျပေါငျး ၁၃ဆကျနဲ့နှဈပေါငျး၁၈၄နှဈကွာအောငျ နနျးစိုကျခဲ့တာမို့ ဒီနနျးတျောဟာ ဗီယကျနမျသမိုငျးမှာ အဓိကနရောမှာ ပါဝငျတယျ။ ရှညျလြားခမျးနားတဲ့ လြှောကျလမျးတှနေဲ့ ဟိုအရငျတုနျးက စညျကားနမေယျ့ နနျးတျောကွီးဟာ အခုအခြိနျမှာတော့ ငွိမျသကျတိတျဆိတျလို့ ကွကှေဲစရာ ခံစားမှုကိုပဲပေးနိုငျတော့တယျ။
အာရှလူမြိုးတှရေဲ့ ရိုးရာဓလစေ့ရိုကျတခုပပေဲလား ဘုရငျဆိုရငျ မိဖုရားပေါငျးမြားပွားစှာ ထားရှိပွီး တနိုငျငံနဲ့တနိုငျငံ လကျဆောငျပဏ်ဏာဆကျသကွတာလညျး သမီးတျောတှဖွေဈနတေတျတာ။ ဗီယကျနမျရဲ့ မိဖုရားဖွဈမယျ့သူဟာ အမာရှတျကငျးစငျသူ၊ အရပွေားကွညျလငျလှပသူဖွဈရမယျလို့ ဂိုကျကရှငျးပွပါတယျ။ မိဖုရားကို အဝတျမပါပဲ ကျောဇောနဲ့လိပျပွီး ဘုရငျ့ရှမှေ့ောကျကို ဆကျသရတယျ၊ ဒါမှသာ မိဖုရားရဲ့ ခွောကျပဈကငျးအလှဟာ သိသာထငျရှားမယျတဲ့။
ဗီယကျနမျမိဖုရား လှ မ လှကို နောကျဆုံးမငျးရဲ့ မိဖုရားပုံနဲ့ နှိုငျးဆကွညျ့နိုငျတယျ။ ပုံကို ဝီကီကနယေူထားတာပါ
နနျးတျောအထဲမှာ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးဆောငျတှကေို အမြားအပွားတှနေို့ငျတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘုရငျကိုးယောကျကို ကိုယျစားပွုတဲ့ ကွေးအိုးခွထေောကျရှညျတှဟော ကိုယျပိုငျ အရညျအသှေးကိုယျစီနဲ့ တငျ့တယျလို့နတေယျ။
ဘုရငျ့မယျတျောရဲ့ အဆောကျအဦးဟာ အရှနေဲ့အနောကျ ယဉျကြေးမှုကို ရောစပျထားတဲ့ နရောလို့ဆိုကွပါတယျ။
နနျးတှငျးအသုံးအဆောငျပစ်စညျး အနညျးအကဉျြးကို နနျးတျောထဲမှာ ပွသထားပွီး
ဓါတျပုံဟောငျးမြားဖွငျ့ သမိုငျးကိုတဆငျ့ တူးဖျောထားကွပွနျတယျ။
လြှောကျလမျးကယျြကွီးတှကေနေ တဆငျ့ ဟိုအရငျအတိတျဆိုတဲ့ နနျးတျောကို ပွနျလြှောကျကွညျ့ရငျး ခွထေောကျတှေ လေးသထကျလေးလံလာတယျ။ ညကလညျး အိပျမထားတာမို့ ဟိုတယျကို လိုကျပို့ပါဗြို့လုပျလိုကျပွီ.
နနျးတျောအပွငျဖကျမှာ လမျးတလြှောကျမှာ မီးပုံးတှေ ထှနျးပွီး အလှဆငျထားတယျ။
ဟိုတယျက အိပျရာကိုတှတေ့ော့ ရမေိုးခြိုးပွီး တုံးခနဲနအေောငျလှဲပဈလိုကျမိတယျ။
Posted by ywartharlay-ytu at 10:40 PM0comments Links to this post